भैंसी गोठ, नेपाली क्रिकेट र सन्दीप !
‘काम पाइनस बुढी के भन्या जस्तो, मन्त्रीको काम..’ हाल न्यूजिल्याण्डमा बस्दै आएका एक जना साथीले तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको यो स्टाटस हेरेपछि केहीबेर म रनभुल्लमा परे ।
तस्बिरमा एकजना मन्त्री भैंसी गोठ उद्घाटन गर्दे गरेको दृश्य प्रस्ट रुपमा देखिएको थियो । ति साथीले तस्बिरसहित राखेको स्टाटस एक हिसाबले सान्र्दभिक नै लागेपनि मन्त्री भैैसीको गोठ उद्घाटनमा जाने कुरा त्यति सहज लागेन ।
सोही फोटो राख्दै पोखराका पत्रकार इन्द्र पौडेलले तस्बिरसहित राखेको स्टाटसमा पनि मेरो आँखा पुग्यो । पत्रकार पौडेलले उक्त विषयलाई यसरी लेखेका थिए । “अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १ कास्कीमा सिम सिम्ले नेपाने बहुउदेश्यीय कृषि फार्मको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय जगत विश्वकर्माले गर्नुभयो । त्यहाँका युवाहरुले फार्म दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । करिब ३ सय रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्न लागिएको फार्ममा हाल सम्म ३८ जना सेयर सदस्य छन् भने आगामी दिनमा सो वडाका प्रत्येक घरबाट सेयर लिन सकिनेछ । ”
जब पत्रकार पौडेलले लेखेको स्टाटस पढे । त्यसपछि मन्त्री विक प्रतिको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन आयो । किनकि खेलकुद मन्त्रीले सिङगो वडाबासीको आर्थिक स्तररोन्नती गर्ने हिसाबले शुरु गर्न लागिएको कृषि फार्मको उद्घाटन गरिरहेका थिए ।
उनले यो फर्मलाई उद्घाटन गरेको विषयलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘उडाउनु’ भन्दा सकारात्मक हिसाबले हेरिनु स्वभाविक विषय हो । तर, खेलुकद मन्त्रीले भंैसी गोठमा रिबन काँटेर कृषि फार्मको उद्घाटन गर्दे गर्दा नेपालको खेल क्षेत्रको भने सरासर उपेक्षामा परेको छ ।
यस अर्थमा खेल क्षेत्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । किनकी विभागीय मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार छोडेर खेलकुद मन्त्री अन्य क्षेत्रमा सक्रिय भएको स्पस्ट हुन्छ ।
यसो भन्दै गर्दा खेलकुद मन्त्री विकलाई अन्य क्षेत्रको विषयमा चासो लिने अधिकार नै छैन भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ । त्यो सरासर गलत हो । तर यति हो खेलकुद मन्त्रीले भैंसी गोठमा गएर रिबन काट्ने समयमा कुनै खेल मैदानको निरीक्षण गरेर खेलमैदान निर्माणका लागि सोचि दिएको भए अति उत्तम हुने थियो । हुन त उनी उत्पादन सँग जोडिन खोजेका होलान् !
नेपाली खेल क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने देशको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशाला वि.स. २०७२ को महाभूकम्पले क्षत विक्षत अवस्थामा रहेको छ । अहिले रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि भत्काउने काम भइरहेको छ त त्यसको गति निकै सुस्त छ ।
क्रिकेटका खेलाडीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दे गर्दा पनि एउटा राम्रो क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन ७ वटै प्रदेशका राजधानी र देशका ७७ वटा जिल्लामा उपयुक्त खेल मैदान निर्माण हुन नसक्दा खेलाडीहरुले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन् ।
त्यसैगरी खेलक्षेत्रमा लाग्ने खेलाडीहरुको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भएका कारण नाम चलेका खेलाडीहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यथार्थताको धरालतमा उभिएर भन्ने हो भने खेलक्षेत्र यतिबेला अत्यन्त धराशयी अवस्थामा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा खेलक्षेत्रको विकासका लागि योजना निर्माण गर्न छाडेर खेलकुदमन्त्री विक भैंसी गोठको रिबन काट्न जानु कति सान्दर्भिक होला ?
पछिल्लो समय विशेषत क्रिकेटको क्षेत्रमा सम्भावना देखिएको छ । नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । तर खेलाडीका लागि एउटा पनि विश्व स्तरको मैदान छैन ।
नेपाली लेग स्पिनरसन्दीप लामिछानेले भारतमा भएको आइपीएलमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सफल भए जसका कारण नेपाली क्रिकेटले थप उचाइ पाएको छ । तर खेलाडीले अवसरहरु नपाउँदा नेपालमै सिमित हुनु पर्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि एउटा कार्यक्रममा नेपालीले क्षमता नभएर नभइ अवसर नपाएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘नेपाली क्षमता नभएका होइनन्, देखाउने अवसर मात्र नपाएका हुन् लामिछानेले दुई चार डल्ला फाल्ने अवसर पाए चर्चा भयो ।’
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले भाषणमा मात्र सम्भावना र अवसरका कुरा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनाउने हो भने खेलक्षेत्रले काँचुली फेर्ने कुरा दिवा सपना मात्र हुनेछ ।